३३ क्यामरा-१५ स्क्रीनको नीगरानीमा रहनेछ रुस विश्वकप, ८८ बर्षको ईतिहासमा पहिलो पटक धेरै प्रविधिको प्रयोग - Seto Khabar३३ क्यामरा-१५ स्क्रीनको नीगरानीमा रहनेछ रुस विश्वकप, ८८ बर्षको ईतिहासमा पहिलो पटक धेरै प्रविधिको प्रयोग - Seto Khabar
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ११:१४
रुसमा १४ जुनदेखी शुरु हुन गइरहेको विश्वकप फुटबलमा यो पटक यस्तो हुन गईरहेको छ जुन फिफा विश्वकपको ८८ बर्षको ईतिहासमा अहिलेसम्म भएको थिएन् । यद्यपी, यो विश्वकपको हरेक म्याचलाई रोचक बनाउन तथा सहि निर्णय लिनको लागी यो विश्वकपमा पहिलोपटक भिडियो रेफरलको प्रयोग हुनेछ । मस्कोमा बनेको सेन्ट्रलाइज्ड भिडियो अपरेशन रुम भन्दा पछाडि हरेक म्याचमा ३३ क्यामरा र १५ स्क्रीनद्धारा अनुगमन गरीनेछ ।
फिफाको रेफ्री कमिटिले भिडियो रेफरलको लागी १३ जनाको भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (वीएआर) यानी सहायक रेफ्री प्रणाली टीम बनाएको छ । यो टिम विश्वकपको ३२ टिमको सबै ६४ प्रतिस्पर्धामा म्याच अधिकारीलाई सहयोग गर्नेछ । वीएआर टीम मस्कोमा एक सेन्ट्रलाइज्ड भीडियो अपरेशन रुममा बस्नेछन् । यो टिम सबे रिलेभेन्ट ब्रोडकास्ट क्यामरालाई एक्सेस गर्न सक्दछ र अफसाइड क्यामरासँग सम्बन्ध राख्नेछ ।
असिस्टेन्ट रेफ्रीले खेलको बिषयमा कुनै पनि निर्णय लिने छैनन्, तर फैसला लीने प्रक्रियामा रेफ्रीलाई सहयोग भने गर्नेछन् । अन्तिम निर्णय लिने अधिकार भने रेफ्रिलाई नै हुनेछ । ब्रोडकास्टर्ड, कमेन्टेटर्स र इन्फोटेनमेन्ट टिम फुटबल प्रेमिहरुलाई समिक्षा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनेछन् । हरेक प्रतिस्पर्धाको लागी ४ भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री हुनेछ ।
३३ क्यामरा र १५ स्क्रीनको रहनेछ निगरानी
वीएआर टीम ३३ ब्रोडकास्ट क्यामरासम्म एक्सस गर्न सक्दछ । यसमा ८ स्लो सुपर स्लो मोशन र ४ अल्ट्रा स्लो मोशन क्यामरा हुनेछ । यसको साथै दुई अफसाइड क्यामरालाई पनि एक्सेस गर्न सक्दछन् । नकआउट चरणको प्रतिस्पर्धाको लागी हरेक गोल पोष्टको पछाडि २ वटा अतिरिक्त अल्ट्रा स्लो मोशन क्यामरा लगाइनेछ । यी क्यामरालाई पनि वीएआर टीम एक्सेस गर्न सक्दछन् । स्लो मोशन रिप्लेको मुख्य रुपबाट प्रयोग वास्तविक अवस्था जान्नको लागी गरीनेछ, जबकी सामान्य स्पीडको क्यामराको प्रयोेग सब्जेक्टिभ निर्णयको लागी गरीनेछ ।
चार अवस्थामा हुनेछ विएआरको प्रयोग
वीएआरको प्रयोग चार अवस्थामा गर्न सकिन्छ:
१. गोल भए पछि
२. पेनाल्टिसँग जोडिएको निर्णय
३. रेड कार्डसँग जोडिएको निर्णय वा फेरी कार्ड देखाइने विषयमा
४. खेलाडीहरुको गल्तीलाई लिएर
सानोभन्दा सानो घटनामा हुनेछ निगरानी
म्याक्सिकोमा दोस्रो पटक भएको १९८६ को विश्वकप सम्पुर्ण रुपमा अर्जेन्टिनाका कप्तान डिएगो म्यारोडोनाको नाममा गयो । म्यारोडोनाको चमत्कारले अर्जेन्टिना दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्यो । फाइनलमा अर्जेन्टिनाले वेस्ट जर्मनीलाई ३–२ ले हराउदै दोस्रो पटक विश्कपमा कब्जा गर्यो । यो भन्दा पहिला इङग्ल्याण्ड विरुद्ध क्वाटर फाइनलमा म्यारोडोनाको दुई गोलले अर्जेन्टिनाले २–१ ले जितेको थियो । तर उनको दुबै गोल चर्चामा रहेको थियो । यसमध्ये पहिलो गोल धेरे विवादित पनि बनेको थियो ।
बल घुम्दै हातमा लागेर गोल पोष्टमा गएको थियो तर रेफ्रीले यसलाई देखेनन् र यसलाई गोल मानियो । यसलाई म्यारोडोनाले भगवानको ईच्छा बताउदै यसलाई ह्याण्ड अफ गडको नाम दिएका थिए जुन आज सम्म पनि यही नामले प्रसिद्ध छ् । यसको चार मिनेट पछि नै उनले यति उत्कृष्ट गोल गरे जसलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट गोल भनिएको छ । म्यारोडोनाले गोलकिपर सहित पाँच खेलाडिहरुलाई चक्मा दिदै उक्त गोल गरेका थिए । म्यारोडोनाले टुर्नामेन्टमा कुल पाँच गोल गरेका थिए । फ्रान्सले बेल्जियमलाइै ४–२ ले हराउदै तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । यसकारण यस किसिमको सानो सानो घटनालाई देख्नको लागी वीएआरको प्रयोग यो पटकको विश्वकपमा गरिनेछ ।